Luulkii nabadda oo lagu gatay $6.5m… | Daldoon Ugu Kaalay Wararkii Ugu Danbeeyey
Luulkii nabadda oo lagu gatay $6.5m…
Dhagax cabirkiisu la mid yahay Ukunta ayaa lagu gatay $6.5m
Tuulada Koryardu ee ka mid ah degmada Kono ee dalka Sierra Leone, oo aan lahayn jid, Cisbitaal, biyo nadiif ah oo la cabo iyo dugsiyo wax lagu barto, ayaa maalin maalamaha ka mid ah Shacabkii tuuladaas ku noolaa waxay heleen Luul ama Daimond. Bulshadii Tabcaanka ahayd ee ku noolayd Tuuladaas , waxay go’aansadeen intii ay suuq madow ku gadi lahaayeen dhagaxan Luulka ah inay dawladooda u gacan geliyaan.
Maalintii Isniinta ayaa dhagixxii luulka ahaa la keenay suuqa New york si loogu tartamo gadashadiisa. waxaana gatay oo hantiyey Laurence Graff, oo ku gatay lacag gaaraysa lix milyan iy shan boqol oo kun oo doolarka Maraykanka ah.
Hadaba sidee lacagtaa loo qaybsanayaa laga helay Luulka laga helay degaan la mid ah Gobolka Sanaag.
Shantii Tuulo ee u deriska la ahaa degaanka Luulka laga helay waxa loo qaybniyaa $1m, Hal milyan oo kale waxa lagu kaalmaynayaa tuulooyinka kale ee aan waxba haysan inta soo hartana waxa lagu kabayaa mashaariicda arimaha bulshada ee dalkaas